Iran: Eropa jilbaha ayey naqabsan doonaan ! - iftineducation.com
Iran Vs eropa
iftineducation.com – Mid ka tirsan xubnaha barlamanka Iran ayaa dhahay way ka shalay doonaan wadamada Eropa joojinta ay joojiyeen iney iibsadaan shidaalka Iran, jilbahey naqabsan doonaan, anagana kama ogolaan doono inaan ka ka iibino dhibic xataa.
Sayyed Emad Hoseini, afhayeenka barlamaanka Iran xubina ka ah gudiga energiga ayaa dhahay “Republik Islam Iran waxow leeyahay aset-ka shidaalka ugu weyn aduunka sadaxaad cid ka saari kartana majirto.”
Sayyed Hoseini waxow kaloo yiri cayaarta ay la ciyaarayaan wadamada Eropa Wadanka sadaxaad ee ugu weyn asetka shidaalka aduunka waxow qalqal galindoonaa sicirka suuqa shidaalka aduunka, Eropa-na ma awoodi doonto iney xakameyso sicirka shidaalka.
“Iran waa wadan weyn oo awood leh, joojinta ay joojiyeen iibsiga shidaalkena wadamada Eropa ayaga un baa ku qasaaraya maxaa yeelay Iran si sahal ah bey ku suuq geyn kartaa shidaalkeeda.” ayuu dhahay
Hoseini Waxow kalo ku daray in Eropa ay ku guuldareysan doonto dagaalka shidaalka ee ay kula jirto Iran, maxaa yeelay wadamada Eropa waqtigaan lajoogo ayagaaba dhibaato kale heysataa lagu daray shidaalka Iran, waxeyna ku noqoneysaa krisis ka ugu xumaa wadamada Eropa.
Shirka wadamada Eropa ee lagu qabtay Brussels 23 Janaayo ee lasoo dhaafay ayey wasiirada arimaha dibada ee Eropa ku gaareen in la joojiyo ka iibsiga shidaalka wadanka Iran, ayna joojiyaan iney u iib geeyaan Iran Daimanka, dahabka iyo waxyaabaha qaaliga ah Iran. (Adan yo)
Dhacdo Xanuun Badan Oo Kadhacday Dalka Norway